Madaxweyne Waare ayaa tababar u furay ciidamo Gaaraya 200 askari | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweyne Waare ayaa tababar ...
Madaxweyne Waare ayaa tababar u furay ciidamo Gaaraya 200 askari
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta tababar u furay in ka badan 200 askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska Hirshabelle, kaasi oo lagu qabtay dugsiga tababarka Booliiska Hirshabelle ee Magaalada Jowhar, waxaana ciidamadani ay noqonayaan dufcadii Seddexaad ee Ciidanka Booliiska Hirshabelle.
Munaasabadda furitaanka tababarka waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo labadiisa ku xigeen, Xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle, saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Hirshabelle, AMISOM, iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay.
Wasiirka Amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo tababarka hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in qorshaha Wasaaradda iyo guud ahaan Hirshabelle uu yahay dib u dhiska ciidanka booliska iyo tababaridooda, si ay u xoojiyaan howlaha ay ugu adeegayaan bulshada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta ahmiyada ciidankani uu u leeyahay Hirshabelle iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in ay u qidmeeyaan bulshada ay ciidanka u noqonayaan, waxaana uu kula dar daarmay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan shacabka oo ay noqdaan kuwa lagu soo hirto.
Madaxweynaha Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare oo furay tababarka ayaa ugu horeyn ku booriyay ciidamada inay ka faa’iideystaan tababarka la siinayo, oo ay noqdaan kuwa u adeega bulshada.
Madaxweynaha oo sii hadlay ayaa Ciidanka ku soo biiraya booliiska Hirshabeelle kula dar daarmay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan Bulshada maadaama ay yihiin Qalbiga shacabka, saaxiibka bulshada, waxaana uu balanqaaday wax kasta oo suura galinaya in aqoonta xirfada ciidanimo kor loo qaado ay sameyn doonaan wuxuuna u rajeeyay ciidankaasi Guul.
Ciidamadani Tababarka Madaxweyne Waare uu u furay ayaa noqonayaa dufcadii seddexaad ee Ciidanka Boliika Hirshabelle waxaana tababarka ay qaadanayaan uu yahay mid casri ah oo wax badan ku soo kordhin doona aqoontooda ciidanimo.